Phoenix inounganidza iyo RemixOS baton yemakomputa edu | Linux Vakapindwa muropa
Vhiki rapfuura takanzwa nhau dzisingafadzi dzekupera kwekusimudzira RemixOS senzira yekushandira yeruzhinji. Izvi zvinogumira mikana yekuve neApple pakombuta yedu. Nekudaro, zvinoita sekunge nharaunda haina kukanda mapfumo uye yakasarudza kumwe kugoverwa kweApple kwemakomputa avo.
Uyo anokunda anonzi Phoenix, vhezheni yeAndroid yakagadziridzwa neLinux kernel uye yakawanda yeGnu / Linux software inoita kuti tive nehurongwa hwakazara hwekushandisa hwakavakirwa paazvino vhezheni yeApple, Android Nougat.
Phoenix ndiyo vhezheni iyo Nechekutanga uye kuenderana kweApple, wedzera chiya chekutanga, maneja wefaira, hwindo rewindows rezvishandiso zvako uye nekuvandudza kana uchishanda nemuviri mbeva uye keyboard. Iyo zvakare ine yekuzivisa nzvimbo inotizivisa isu kumeseji, maalarm, nezvimwe ...
Sezvo zvakaunzwa gore rapfuura, Phoenix yakavandudza zvakanyanya, ichizvirumbidza nharaunda yakakura uye zvimwe zvigadzirwa. Phoenix haisi kungotsigira 32-bit uye 64-bit makomputa, iri zvakare inowirirana nemahwendefa akasiyana anotsigira Nexus uye munguva pfupi ichave Raspberry Pi uyo achange ari pane izvo zvinyorwa.
Kune rimwe divi, kusiyana nedzimwe shanduro dzeApple yedesktop, Phoenix inoenderana neWindowsMune mamwe mazwi, ine inosimudza, chimwe chinhu chinoshanda kune vashandisi vatsva pakuisa masisitimu anoshanda. Iyo yekumisikidza yePenieni mufananidzo inogona kuwanikwa kubva peji yepamutemo yeprojekti.
Phoenix yakave nekushanduka kwakawanda uye muchikamu chave chiri chekutenda kune Mahara Software uye nekuvandudzwa kweApple, iyo kune rumwe rutivi yakavakirwa paLinux kernel. Ndosaka isu tikatsvaga maapps senge iyo smartphone, Phoenix isarudzo huru yekombuta yedu, kunyangwe tichifanira kutaura kuti haazi ese maapplication eApple akagadziridzwa pakombuta, saka tichava nekukanganisa kusinganzwisisike neapp yatinoshandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Phoenix inounganidza iyo RemixOS baton yemakomputa edu
Mahwendefa anotsigira Nexus?
Unobvumira Nexus 6P kuiswa mukati mehwendefa, kana ...?
Handizive kuti izvi zvinorevei.
Hazvina kujeka, chero, kana maapplication anogona kumhanya pane ino inoshanda sisitimu yeGoogle Play Chitoro kana kwete.